Marigold (ထပ်တစ်ရာပန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Marigold (ထပ်တစ်ရာပန်း)
Marigold (ထပ်တစ်ရာပန်း) ကဘာလဲ။
ထပ်တစ်ရာပန်း ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ထပ်တစ်ရာပန်းဆိုတာ အပင်တစ်မျိုးပါ။ ရာသီသွေးလာစေခြင်း နှင့် အဖျားကျစေခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ လည်ချောင်းနာ၊ ပါးစပ်နာ၊ ရာသီလာစဉ် သားအိမ်ညှစ်ခြင်း၊ ကင်ဆာနှင့် အစာအိမ်၊အူသိမ် အနာပေါက်ခြင်းတို့ကို ကုသရန်အတွက်လည်း သုံးပါတယ်။
အောက်ပါတို့အတွက်လည်း အရေပြားကို လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အနာ၊ အရောင် ကျစေခြင်း
အနာမကျက်နိုင်ခြင်း၊ ခြေထောက်အနာဖြစ်ခြင်းများ ကုသခြင်း
နှာခေါင်းသွေးလျံခြင်း၊ သွေးပြန်ကြောများ ထောင်နေခြင်း၊ လိပ်ခေါင်း၊ အူမကြီး ရောင်ရမ်းခြင်း နှင့် မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း တို့ကို ကုသခြင်း
ထပ်တစ်ရာပန်းကို အခြားအရာများအတွက်လည်း အသုံးပြုပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်းမှာ ပါတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးက ို တစ်ရှုးတွေ အသစ်ဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် အနာကျက်ခြင်း ကူညီပေးတယ်၊ လည်းချောင်းနဲ့ ပါးစပ်တွေမှာ ရှိတဲ့ ရောင်ရမ်းနာတွေကို လျော့နည်းစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်၊ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်း အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန် ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေခြင်း။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးနို့တိုက်စဉ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတဲ့ ဆေးများကိုသာ သောက်သုံးသင့်လို့ပါ။
အခြားဆေးများ သောက်သုံးနေခြင်း။ ဖြည့်စွက်ဆေးနှင့် ဘယဆေးတို့လို ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်မပါဘဲ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် ဆေးတွေ အကုန် ပါပါတယ်။
ထပ်တစ်ရာပန်း ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ အခြားဆေးဝါးတို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
နာမကျန်းခြင်း၊ မူမမှန်ခြင်းနှင့် အခြားသောကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ရှိနေခြင်း။
အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ ကြာရှည်ခံဆေး နဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ကဲ့သို့သော အခြား ဓါတ်မတည့်မှုများရှိနေခြင်း။ toragweed၊ chrysanthemums၊ marigolds၊ daisies နှင့် အခြားသောအပင်တို့နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိနေခြင်း။
ဆေးဖက်ဝင်အပင်၊ဖြည့်စွက်စာများအတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများသည် ဓါတုဆေးဝါးများလောက် တင်းကြပ်မှုမရှိပါ။ ဘေးကင်းတယ် စိတ်ချမှုအတွက် နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရပါဦးမယ်။ ယင်းဆေးကို သုံးရင်ရမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက သူ့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုများဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်း က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးတွေမှာ ကုသလိုသည့် နေရာတွင်သာ လိမ်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဆောင် သို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင် ဖြစ်နေပါက ထပ်တစ်ရာပန်းကို သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် စိတ်မချရလောက်ပါဘူး။ ရှောင်ကြဉ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအတွက် အသုံးပြုသောဆေးများနှင့် ထပ်တစ်ရာပန်းကို ပေါင်းသုံးမယ်ဆိုရင် အလွန်အိပ်ချင်နေပါလိမ့်မယ်။ ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်အလိုမှာ ထပ်တစ်ရာပန်း သောက်သုံးခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်း ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ယင်းပန်းက အရေပြားမှာ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်စေပါတယ်။
လူတိုင်းတော့ ဆိုးကျိုးတွေ မခံစားရနိုင်ပါဘူး။ အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးတစ်ခုခု ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ ဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်း ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ယင်းပန်းက သောက်သုံးလျက်ရှိသော ဆေးဝါးများ၊ လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေတို့ဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်မှာ ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်းက အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ငြိမ်ဆေးကလည်း အိပ်ငိုက်စေပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်ဆေးနှင့် ထပ်တစ်ရာပန်း တွဲသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အလွန်အိပ်ချင်စေပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ငြိမ်ဆေးအမျိုးအစားတွင် clonazepam (Klonopin)၊ lorazepam (Ativan)၊ phenobarbital (Donnatal)၊ zolpidem (Ambien)နှင့် အခြားသောဆေးဝါးများ ပါဝင်ပါတယ်။
ထပ်တစ်ရာပန်း အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
၅-၁၀ ဂရမ် ရှိတဲ့ ပန်းအခြောက်တို့ကို ၂၅၀ မီလီလီတာရှိသော ရေနွေးဆူဆူထဲထည့်ပြီး ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ၁၀မိနစ် ၁၅မိနစ်လောက် ပြုတ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ၂ခွက် ၃ခွက်လောက် သောက်ပေးပါ။
၉၀ရာခိုင်နှုန်း အယ်ကိုဟော ထဲတွင် ၁ အချိုး ၅ ဖြင့် ဖျော်ပြီး တင်ချာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တင်ချာ ၅ စက်ကနေ ၁၀စက် (၁-၂ မီလီလီတာ) ကို တစ်နေ့ သုံးကြိမ် အသုံးပြုပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်း ၂-၅ ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့ လိမ်းဆေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ ၁၀၀ ဂရမ် လိမ်းဆေးတွင်၂-၅ ဂရမ် ထပ်တစ်ရာပန်း)။ တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ်ကနေ ၄ကြိမ်အတွင်း လိုသလို လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
သောက်ရမည့် ထပ်တစ်ရာပန်း ပမာဏသည် လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူပါ။ ဆေးပမာဏသည် အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နှင့် အခြားသော အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ စိတ်မချရပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့ ဆေးပမာဏကို သောက်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်၊ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပေးပါ။
ထပ်တစ်ရာပန်း က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ထပ်တစ်ရာပန်းကို အောက်ပါ ပုံစံတွေနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 8, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 15, 2017
Marigold. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-235-Marigold.aspx?activeingredientid=235&activeingredientname=Marigold. Accessed November 28, 2016
Marigold. https://medlineplus.gov/druginfo/natural/235.html. Accessed November 28, 2016
Marigold. http://www.herbal-supplement-resource.com/Marigold-herbs.html. Accessed November 28, 2016
နေအိမ်နဲ့ကားမှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရေးပေါ်ဆေးသေတ္တာတစ်ခု ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြရအောင်
ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးများသော အပင်များ